Iindlela eziqhelekileyo zokulungisa iimpazamo kumsele omdaka
Ukuvalwa kwemijelo yamanzi rhoqo kwenzeka, njengokuvala ezinye iinwele, imicu kumjelo wamanzi amdaka ophuma koomatshini bokuhlamba impahla, igrisi kunye nothuli oluqokelelwe kwindlu yangasese, njl.njl. Kubomi bemihla ngemihla, idreyini yaphantsi o ...
Uyicoca njani itepu
Impompo sisiseko esisiseko sekhitshi kunye nendawo yangasese. Ayisetyenziselwa ukuhlamba kuphela, kodwa kunye nokuhlamba izitya kunye nezinti, ezibonelela ngokulula ebomini. Isetyenziswa ixesha elide. Ndifumanise ukuba itepu ayikhanyi kwaye akukho lula ukuyisebenzisa njengangaphambili. Kubonakala ngathi ifuna ...
Ubungozi kumdaka womphezulu wokuchasana nevumba: 1. Ungcoliseko lokusingqongileyo (1) Ubunzulu betywina lamanzi abulunganga, ubukhulu becala njenge-10-20mm, ekulula kakhulu ukuyomisa, ibangela ivumba kumbhobho wokuhambisa amanzi ukuba Buyela egumbini. Nokuba itywina lamanzi linzulu kwi-50mm okanye nangaphezulu, iya kuba kuphela ...